कोरोना निको भएको कति दिनमा यौनसम्बन्ध राख्ने ? यस्तो छ अनुसन्धानको खुलासा - Everest Dainik - News from Nepal
कोरोना निको भएको कति दिनमा यौनसम्बन्ध राख्ने ? यस्तो छ अनुसन्धानको खुलासा
हामीलाई कोरोनाका बारेमा सबैकुरा थाहा पाएको ठान्छौं । तर यो संक्रमणका बारेमा आज एउटा कुरा सही लागेपनि त्यसका बारेमा थप नयाँ तथ्यले पुरानो मान्यता परिवर्तन गरिरहेको छ ।
जस्तो कि शुरुमा हामीलाई मास्कको त्यति महत्व थाहा थिएन तर अहिले भने मास्क अनिवार्य बनेको छ ।
यस्तै कुरा कोरोना र यौनसम्बन्धको पनि रहेको छ ।
कोरोना संक्रमण यौनजन्य संक्रमण होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यसअघिका अनुसन्धानहरुले सेक्सलाई कोरोनाबाट अलग राखेर पनि हेरेका छन् । कोरोना वीर्यबाट संक्रमण नहुने कुरा बताएका थिए । तर अहिलेका केही नयाँ अध्ययनले भने कोरोना संक्रमण र यौनसम्बन्धबारे नयाँ तथ्यमा प्रकाश पारेका छन् ।
जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एशोसिएसनको एक जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानले भने वीर्यमा कोरोना भाइरस उपस्थित हुनसक्ने कुरा उल्लेख गरेको हो । आलेखमा कोरोना भाइरसबाट निको भएकाहरुले कम्तिमा ३० दिनसम्म यौनसम्बन्ध राख्न नहुने बताइएको छ ।
उक्त अध्ययनमा कोरोनाबाट निको भएका ३८ पुरुषहरुको वीर्य संकलन गरिएको थियो । चीनको हेनान प्रांन्तका ती ३८ जना पुरुषहरुमध्ये १६ प्रतिशतको वीर्यमा कोरोनाका कणहरु देखा परेका थिए । यसअघि जर्नल अफ फर्टिलिटी एण्छ स्टर्लिटीमा भने ३४ चिनियाँहरुको वीर्यमा कोरोनाको कुनै चिन्ह नदेखिएको उल्लेख थियो ।
त्यसो त नयाँ अध्ययनमा १६ प्रतिशतमा कोरोनाका कणहरु देखिएपनि यसबाट सर्ने नै निश्चित छ भन्न नसकिने उल्लेख छ । तर सावधानीपूर्वक कोरोनाबाट निको भएकाहरुले तीस दिनसम्म यौनसम्पर्क नराख्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार, रक्तसञ्चार प्रणालीबाट वीर्यमा भाइरसका कण पुगेको हुनसक्छ ।
ट्याग्स: corona and sex